N+050612 ဒါနဆိုတာသံသရာရှည်တယ်ဆိုတဲ့လူမိုက်များအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » N+050612 ဒါနဆိုတာသံသရာရှည်တယ်ဆိုတဲ့လူမိုက်များအတွက်
Posted by nature on Jun 5, 2012 in Creative Writing | 13 comments
ကြံကြံဖန်ဖန်တရားနာရင်း ကြားခဲ့ရတာကတော့ ဒါနကသံသရာရှည်သတဲ့။ဒီလိုတရားမျိုးဟောပြီး ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ အမဲရိုးနှယ်ဟင်းအိုးမှအားမနာဆိုသလို တရားဟောချင်သေးတယ်။ ကိုယ်ဥာဏ်လေးတထွာတမိုက်နဲ့ ကိုယ်ထင်တာကိုလျှောက်ချဲ့ပြောတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံ အားနည်းသူတွေ အတွက်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
မှားမယ်ဆိုလည်းမှားလောက်ပါတယ်။ တော်တော်လေးဖြေရှင်းရခက်တဲ့ အချက်တချက်ပါပဲ။ ဒါနနဲ့သံသရာက မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ မှန်ပါတယ်။ဒီတော့လွယ်လွယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကတော့ ဒါနကသံသရာရှည်တယ်ပေါ့။
ကောင်းပြီ။ ဒါနကသံသရာရှည်တယ်ဆိုရင် သံသရာပြတ်အောင်ဒါန မလုပ်ပဲနေပါ။ ဒါနမလုပ်ရင်သံသရာပြတ်သွားမှ ဒါနကသံသရာရှည်တယ်ဆိုတဲ့စကားကမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားဟော ကြားထားတာကတော့ သံသရာရှည်ရခြင်းဟာ တဏှာနဲ့အ၀ိဇ္ဇာကြောင့်လို့ ဟောထားပါတယ်။ ဒါနက တိုတိုပြောရရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုပေမဲ့ လိုက်နာကျင့်သုံးရမဲ့ အင်္ဂါရပ် တွေအများကြီးလေ့လာစရာလိုပါသေးတယ်။ သံသရာဆိုတာကတော့ ဒါနနဲ့ မဖြတ်နိုင်ပေမဲ့ ဒါနကြောင့်သံသရာရှည်တယ်ဆိုတာကတော့ မိုက်မဲတဲ့အယူအဆတခုလို့သာထင်မြင်မိပါကြောင်း။
ပြောရရင်တော့ ကြားဖူးတဲ့ ကျူံးသွင်းမေးတဲ့ လော့ဂျစ်ကလေးတခုလို ကျီးကန်းသည်မဲသည်။ ကျီးကန်းသည်ငှက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငှက်တိုင်းသည်မဲသည်ဆိုတဲ့တလမ်းသွားမှားယွင်းတဲ့ လော့ဂျစ်တခုလိုပါပဲ။
ဒါမျိုးခပ်ဆင်ဆင် ကျူံးသွင်းမေးမြန်းထားတဲ့ နောက်တခုရှိပါသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာသမ္မာဒိဌိ ၀ါဒဖြစ်တယ်။ သင်ဟာသမ္မာဒိဌိဖြစ်ပြီးလား။ သမ္မာဒိဌိမဖြစ်သေးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးလို့ ဆိုတာလေးလဲ ဖတ်လိုက်ရဘူးပါတယ်။
ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်စွာဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရင် ကံ နဲ့ကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရပါမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရာမှာလည်း အခြေခံကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာ သမ္မာဒိဌိဆိုတာ အဆင့်မြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှရှိတာပါ။
တရားသိလျှက်အကျင့်ခက်တဲ့။ ခက်တဲ့တရားကိုစွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေကျင့်ကြပါစေ။ ခက်လို့ဆိုပြီးကိုယ်ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်လွယ်အောင်မပြင်သင့်ပါဘူး။
သဘာဝတရားအစစ်အမှန်ကတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာကတော့ဖြစ်တည်ပျက်ဆိုတာပါပဲ။ သဘာဝဆိုတာကတော့ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ လူ့သဘာဝ ဆိုတာကတော့ ကာမတဏှာ ရဲ့အာရုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သဘာဝပါပဲ။ လူ့သဘာဝ ၊ နတ်သဘာဝ ၊အမူးသမားသဘာဝ၊တိရိစ္ဆာန်သဘာဝ စသည်ဖြင့် ဘယ်အရာနဲ့မဆိုတွဲဖက်နိုင်တဲ့ လေးနက်ကျယ်ပြန့်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ တွဲဖက်ထားတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပါယ်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။ ဥာဏ်မမှီတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ရောထွေးသွားတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်း မုသာဝါဒကံကိုလုံအောင်ထိမ်းကြဖို့လေးနက်စွာ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒါမှသာလိမ်ညာကျူံးသွင်းပြီး မီးလောင်တိုက်သွင်းမဲ့ဝါဒက လွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘ၀မှာ မုသာဝါဒကံ ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ့်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းမဲ့ဝါဒကြီးဖြစ်တဲ့ မီးပုံကြီးကိုရွှေပုံကြီးလို့မျက်စိထဲမှာမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးပို့စ် တင်လိုက်တာ အကျိုးကျေးဇူးတခုရလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့မိုးပြာတွေရဲ့အရှိုက်ထိသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သူတို့ရဲ့ကွန်မန့်တွေကတဆင့် သိလိုက်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က ဦးအောင် ၀ီကီမှာအရင်ပြင်ထားပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝီကီကို ကိုင်ကိုင်ပြီးငြင်းနေတာထင်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒက ပြင်မယ်ဆိုတာတော်တော်လေး(တော်တော်လေး ) စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားပုံရပါတယ်။
ကိုကြောင်ကြီးပြောသလို ပြင်ရင်လည်းသီတဂူဆရာတော်၊ ပါမောက္ခချူပ်ဆရာတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံသံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံသံဃာယနာထေရ၀ါဒမူလို့ထည့်ရင်
တကြောင်းလောက် တပိုဒ်လောက်ဖဲ့ထုတ်ပြီး ကိုယ်လိုရာအဓိပ္ပါယ်ရောက်အောင်ဆွဲဖွင့်-
စ လယ် ဆုံး သုံးပါးလုံး ညီညွတ်စွာရှိတဲ့ တရားတော်တွေကို
ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေထည့် မကြိုက်တာလေးတွေ မသိယောင်ဆောင်ပြီး
ဘုရားတရားကို ကိုယ့်တရား လုပ်နေသူတွေ (လူတွေ၊ရဟန်းတွေ)
သုတ္တန် ရဲ့အမည်ထဲက သုတ္တ ဆိုတာ အခြားအဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် တမျဉ်းကြိုးကလေး … တဲ့
သစ်ပင်သစ်လုံးတွေ ခွဲခြမ်းတဲ့အခါ တမျဉ်းကြိုးလေးနဲ့ တားပြီး(အရာပေးပြီး)မှ ခွဲရင်
အပို/ အလို အယုတ်/အလွန် မရှိဘူးပေါ့…။
ဒါကြောင့် ပရိယတ် ပဋိပတ် စွယ်စုံ နှံ့စပ် လှတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ တရားဟောရင်
သုတ္တန်တွေကို အကြောင်းပြုလို့ နယ်ကန့်ပြီး ဘုရားတရားကိုပဲဟောတယ်…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘုရားလုပ်ပြီး ကိုယ့်အယူအဆတွေ ဇောင်းပေးမဟောဘူး..။
ဒါကတော့ နယ်ကျွံလာတဲ့ ထေရ၀ါဒအမည်ခံ(လူ/ဘုန်းကြီး)တွေကို သတိပေးတာပါ…။
ကျုပ်က ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဝါဒတွေကို မဆိုင်သလိုပဲနေပါတယ်…။
ဒါနကြောင့် သံသရာရှည်တယ် ဆိုတဲ့ အယူမျိုးကို ထေရ၀ါဒမှာ လုံးဝမရှိပါဘူး။
ဒါနကို အကြောင်းပြုလို့သာလျှင် အခြားကုသိုလ်များပြုနိုင်တဲ့ မြတ်သောဘုံဘ၀တွေမှာကျင်လည်ခွင့်ရပြီး
အဲဒီဘ၀တွေမှာလဲ သီလ ဘာဝနာ စတဲ့ကုသိုလ်တွေ လုပ်ခွင့်ရနိုင်အောင် အချိန်/ဥစ္စာ စသည်တို့ပြည့်စုံပြီး
ဒါနသာလုံးလုံးမရှိရင် သီလ ဘာဝနာ တို့ ကောင်းစွာပြုနိုင်မယ့် မြတ်သောဘုံဘ၀တို့ရောက်ဘို့လဲ မသေချာဘူး
ရောက်ပြန်ရင်လဲ သူများကံကျွေးဖြစ်နေရတာမျိုး ၊ စားဘို့ရှာ-ရှာဘို့စားနေရတာမျိုးကြောင့် သီလ၊ဘာဝနာစတဲ့ ကုသိုလ်များ ထိထိရောက်ရောက်မပြုနိုင်ပါဘူး…။
သီလ ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်တွေ ထိထိရောက်ရောက်မပြုနိုင်ရင်
မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် မရ ဘူးပေါ့…။
မိမိထံက ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကို နည်းနည်းများများ သူများကိုပေးရဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။
အဲဒါကို ပြုလုပ်နိုင်လို့ ဒါနဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ အဲဒီလို သူတပါးအကျိုး၊ သူတပါးအဆင်ဖို့ ရည်ရွယ်ကူညီမှု့တွေ၊ လှုဒါန်းမှု့တွေဟာ ဘယ်ဘာသာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်၊ အဲဒီလိုရှိလို့လည်း လူမှု့အကျိုးပြုအသင်းတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကမ္ဘာအနှံမှာပေါ်ထွန်းနေသလို အားပေးချီးမြောက် သူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးဖြစ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတပါးကို အဆင်ပြေအောင် ကူညီစွန့်လွှတ်မှု့ဖြစ်တဲ့ ဒါနဟာ သံသရာရှည်၊ မရှည်ဆိုတာတော့ ဥာဏ်မမှီပေမယ့် ကောင်းမွန်သောအလေ့အထ တစ်ခုဆိုတာတော့ အသေချာဘဲလေ။အဲဒီတော့ ဘာသာတိုင်း ဒါနပြုသူတွေကို ချီးမွှမ်းကြမှာပါ။
သံသရာဆိုတာ ဘယ်ကစတယ်ဆိုတာ သိဖို့တောင် မလွယ်ပါဘူး။
တစ်မဂ်တစ်ဖိုလ် မရသရွေ့ အလွန်ရှည်လျှားလှတဲ့ သံသရာခရီးကြီးကို လျှောက်လှမ်းကြရမယ့် ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာ ကုသိုလ်ရိက္ခာပြည့်စုံမှ အေးချမ်းတဲ့ဘ၀တွေကို ရနိုင်မှာမို့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ တည်းဟူသော ကုသိုလ်ရိက္ခာတွေကို ရနိုင်သလောက် စုဆောင်းထားနိုင်မှ တန်ကာကျပါမယ်။
ရေဘူး နဲ့ ဖိနပ်မပါ နွေခါမှသိ
ဒါနနဲ့ သီလမပါ သေခါမှ သိ
လို့ တောင် ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားတစ်ခု ရထားလို့ သံသရာရိက္ခာတွေ ပြည့်စုံနေပြီထင်ရင်တော့လည်း…………………….
ဒါန ဆိုတာက စွန့်လွှတ်ခြင်း ..
စွန့်လွှတ်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက် မငဲ့ကွက်တော့ဘူးပေါ့နော် ..
အဲဒီလို ကိုယ့်အတွက် မပါတဲ့ ဒါနမျိုးက သံသရာကို မရှည်စေပါဘူး …
ဦးနေချား ပြောသလိုပဲ …
သံသရာရှည်စေတဲ့ အဓိက တရာခံတွေက တဏှာနဲ့ အဝိဇ္ဇာ …
တဏှာ ဆိုတာက လိုချင်တပ်မက်မှု ..
အဝိဇ္ဇာ ဆိုတာကတော့ လွယ်လွယ်ပြောရရင် အမှန်ကို မသိခြင်း ..
ဒီနှစ်ခုနဲ့ ဖက်စပ်ထားတဲ့ ဒါနကတော့ သံသရာကို ရှည်စေပါတယ် ….
ချမ်းသာမှာပဲ ဆိုတဲ့ မသိမှုနဲ့ နတ်သား နတ်သမီး ဖြစ်ချင်လို့ ဆိုပြီး ဒါနပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီဒါနက နတ်သား၊ နတ်သမီး အဖြစ်ကိုတော့ တွန်းပို့ပေးရုံလောက်ပဲ စွမ်းမှာပါ …
တကယ်လို့သာ နိဗ္ဗာန်ကို ရည်မှန်းပြီး အမှန်တကယ် စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ ဒါန ပြုမယ်ဆိုရင်တော့
အဲဒီဒါနက နိဗ္ဗာန် ရတဲ့ဘဝအထိ လိုက်ပြီး အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ် …
ဒါက သံသရာဖြတ်တဲ့ ဒါနမျိုး ..
အမှန်အကန် ဒါနမျိုး ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် …
ကြားဖူးနားဝတွေနဲ့ ပြောသွားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ..
အမှားပါက ခွင့်လွတ်စေချင်ပါကြောင်း ….
( သံသရာရှည်စေတဲ့ အဓိက တရာခံတွေက တဏှာနဲ့ အဝိဇ္ဇာ )
တဏှာ ဆိုတာကို ( ကိုယ့်အခြေနေနဲ့ ) နေရာဒဂါ အပြစ်လိုက်မြင်ရင် လမ်းလွဲသွားတတ်ဒယ်
ခန္ဓာနောက်က တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ မလိုက်စေနဲ့လို့
( တဏှာသင်္ခယ သုတ် )
2012 ခုနှစ်မှာ သဂျီးမင်းတြားဂျီးဒို့ဖက်ကိုလည်း ထွက်ပေါက်ပေးရမယ့်သဘောဂ
လွယ်လွယ်ပြောရင် လူပြောများတဲ့ ဝိဿခါ ကျောင်းအမကြီးကို ညွှန်းပါ့ဗျာ
( လင်ယူတယ် သားမွေးတယ် ပွဲကြည့်တယ် )
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ နှင့်ယှဉ်သော တဏှာသည် ဒုက္ခဘုံကိုသွား ( အောက်သံသရာဘုံ ) ( ဒုက္ခသစ္စာ)
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ နှင့် မယှဉ်သော တဏှာသည် လူနတ်ဗြဟ္မာ ( အထက်သံသရာဘုံ ) ( ဒုက္ခသစ္စာ)
ဆိုလိုတာက တဏှာကိုပယ်ရမဲ့အကြောင်းကို ညီညွတ်အောင်ပြောဘို့လိုဒယ်လို့
မဟုတ်လို့ဂဒေါ့ ဘဝဆိုတာကို သုံညကိန်းဆိုက်တယ်ဆိုပြီး
ဓမ္မစေတီဆရာတော် အရှင်ကောသလ္လဟောထားတာတွေ သိပ်ကောင်းလှပါတယ်
ဟိုနေ့ တုန်းက ပို့ စ်ကော ၊ အခုပို့ စ်ပါ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ ။
ကွန်မင့်ဖြင့်သာ အားပေးခဲ့ ကြောင်းရယ်ပါ ။
ဟုတ်ကဲ့…ကိုနေချားရဲ့ ဒါနဟာ သံသရာရှည်တယ်ဆိုတဲ့..စာစုလေးကိုဖတ်ရ ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ပါဝင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ ဒါနဟာ အမှန်တကယ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ ဒါနကြောင့် သံသရာရှည်တယ်ဆိုတဲ့ အယူဟာလဲ လုံးဝမမှန်ပါဘူး။ သို့သော်လဲ စာပေမှာ ၀ဋ္ဋဒါန နဲ့ ၀ိဝဋ္ဋဒါန ဆိုပြီး ပြထားတာတော့ တွေ့ပါတယ်။ နောက်တခု ကျွန်တော် သိနေတာလေး တစ်ခုက…အ၀ိဇ္ဖာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ.. မသိမှုနဲ့လုပ်ရင်… မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ သင်္ခါရအရ ကောင်းတာလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ပုညာဘိ သင်္ခါရတွေပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသိမှုနဲ့လုပ်ရင် သံသရာကိုလည်စေပါ တယ်။ ဒါလဲ အလှူဆိုတဲ့ ဒါန က သံသရာကိုလည်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မသိမှု့က သာ သံသရာကိုလည်စေတာပါ။
ဒါကြောင့် အတိုချုံးကြစို့ဆိုရင်… အသိမဲ့နဲ့လှူရင်… သို့မဟုတ် အ၀ိဇ္ဖာ ဦးစီးလှူရင် သံသရာလည်စေပါတယ်။ သို့သော် ဒါနကြောင့် လည်စေတာမဟုတ်။ အသိမဲ့ သို့မဟုတ် မသိမှု့က လည်စေတာလို့ ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
သံသရာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မဆွေးနွေးသေးပဲ လက်တွေ့လောက အကျိုးပြုမှုလေးတွေကိုပဲ ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သိနေတာလေးကို ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ.. ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တ်ာတို့ မြန်မာတွေဟာ အလှူအတန်းအများဆုံးပါ။ ၁၂-လ မှာ အလှူပြတ်တဲ့ လတောင် ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ မကြီးပွားကြပါဘူး။ (နိုင်ငံကြောင့်လို့လဲ အကြောင်းပြနိုင်ပါတယ်။) ခရစ်စယာန်ဘာသာဝင် တွေ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အလှူပွဲတွေ ကျွန်တော်တို့လောက် မများပေမယ့် သူတို့ချမ်းသာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ လှူတာထက် သူတို့လှူတာကို ကျွန်တော် ပိုသဘောကျမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ မြန်မာတွေလှူနေကြတာဟာ… ကိလေသာတွေနဲ့ လှူတဲ့ အလှူတွေ များတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ ဥပမာ ..ကထိန်ပွဲ.. သူတို့ရပ်ကွက်ထက် ငါတို့ရပ်ကွက်က သာအောင်။ ငါ့ကုမ္မဏီက လှူတဲ့ ကထိန်က သူတို့ကုမ္မဏီထက်သာအောင်။ ငါ့တို့ကို..ငါတို့ရပ်ကွက်ကို လူတွေသိအောင်…ကျော်ကြားအောင်… ဂုဏ်တွေတက်အောင်.. နောင်ဘ၀ ကောင်းအောင်.. နတ်ပြည်ရောက်အောင်.. အလှူခံသူ လိုလို.. မလိုလို.. လိုအပ်တာ ဟုတ်ဟုတ်.. မဟုတ်ဟုတ်။ ကိုယ့်အတွက်.. ကျော်ကြားရေး ဂုဏ်တက်ရေး ကိုယ်ကောင်းစားရေး ဆိုတဲ့ လောဘတွေ ဒေါသတွေ မာနတွေ နဲ့လှူကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အလှူမှာ ကိလေသာတွေနဲ့ လှူတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါ။
အနောက်နိုင်ငံက လှူတွေကတော့ သူတို့ဘုရားသခင်ကြိုက်အောင်ဆိုတာ တစ်ခုလောက်ကိုပဲ ဦးတည်ပြီး တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လိုအပ်တာ တွေကိုလှူကြပါတယ်။ စာသင်ကျောင်းမရှိတဲ့နေရာ.. ကလေးတွေ ကျောင်း သွားတက်ရတာ ဝေးတဲ့နေရာ..တွေမှာ စာသင်ကျောင်းလှူတယ်။ ရေမရှိတဲ့ နေရာ ရေလှူတယ်။ လှူတဲ့သူက ဘုရားသခင်ကြိုက်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လှူတာဖြစ်လို့ လှူသင့်တဲ့နေရာမှာ လှူကြတယ်။ လိုအပ်တာရသွားတဲ့သူတွေ သိပ်အကျိုးများတယ်။ နိုင်ငံအတွက်လဲ သိပ်အကျိုးများတယ်။
ဗုဒ္ဒဘာသာတွေကတော့.. ၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူရင် ငရဲမရောက်ဘူး။ သောတာ ပန်နဲ့တူတယ်။ ရေလှူရင် ရေအကျိုးဆယ်ပါး။ ကထိန်လှူတော့ ကထိန်သင်္ကန်းအကျိုးက ငါးမျိုး.. ကြေးစည်လှူရင် အသံကောင်းမယ်.. ကိုယ့်သားကို ရှင်ပြုမှ သာသနာ့အမွေခံနိုင်မယ်။ စသဖြင့်ဒါနဲ့အကျိုးတွေ အမျိုးမျိုးပြောပြီး သိနေကြတော့.. အလှူခံတဲ့နေရာနဲ့ အလှူခံသူတွေ လိုအပ်လို့ အကျိုးများတာ မများတာ မသိ ထည့်မတွက်။ .. နောင်မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကျိုးကိုပဲ ကြည့်ပြီးလှူနေကြတာတွေဟာ အသိမဲ့အလှူတွေ.. မသိမှုဦးစီးလှူတဲ့ အလှူတွေကြောင့် နိုင်ငံမှာ လှူသလောက် အကျိုးမများသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေတာလေးတွေကိုသုံးသပ်ရရင်..
ဒီနေ့ ဘုရားဖူးအဖွဲ့တွေ.က .. ကားပေါ်ကနေ ပိုက်ဆံတွေကျဲကြတယ်။ လမ်းဘေးကလေးတွေက လုကောက်ကြတယ်။ ကားတိုက်မှု.. စာသင်ပျက်မှု စတာတွေဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်မှ တားရတယ်။ တောင်ပြုံးတို့. အများကြီးပါ။ ကြိုက်ထီးရိုး ပုံဂံ နေရာအနှံ့ပါ။ ဒါန ဟာ ကောင်းတယ်ဆိုပေ မယ့် အသိမဲ့လုပ်ရင် ကောင်းပါသလား။ အဲဒီလို ကားပေါ်ကနေ ငွေတွေကျဲ နေတာလဲ အလှူတွေပဲ မဟုတ်လား။
ရွာတရွာမှာ လျှပ်စီးမီးလင်းရေးအတွက် သိန်းငါးရာလိုနေပါတယ်။ လှူသူမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီရွာ ရှင်ပြုအလှူပွဲ တနှစ်ထဲ ၁၀=လှူရှိတယ်။ သိန်း ၇၀၀-ကုန်သွားတယ်။ အဲဒီအလှူဆယ်လှူကြောင့် ၁-လှူကို တရွာလုံး ၁၀-ရက်ပဲ အလုပ်ပျက်။ ၁၀=လှူအတွက် ရက်၁၀၀ အလုပ်ပျက်သွားတယ်။ အဲဒီအလှူတွေမှာ ၀တ်ဖို့.. မိဘတွေက သားသမီးတွေကို ဖိနပ်။ မိတ်ကပ်။ အ၀တ်အစား.. နောက်ထပ်ရွာက ကုန်လိုက်တဲ့ငွေ သိန်း၅၀၀. တွက်ကြည့်ပါ။ ဒါတွေဟာ လှူတာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် အသိမဲ့အလှူတွေဟာ လူကိုသိပ်အဆင်မပြေစေဘူးလို့ခံစားမိပါတယ်။ တရွာလုံး မီးတွေလင်းမယ်။ ကလေးတွေ ပညာရေး ညတွေစာကြည့်နိုင်မယ်။ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်မယ်။ တသက်လုံးရွာမှာ အကျိုးတရားတွေ အများကြီးရမယ်ဆိုတာမျိုးကို လူတွေစိတ်မ၀င်စားပဲ ရှင်ပြုအလှူပွဲ ၁၀=လှူ ကျင်းပလိုက်တာ ဒီနေ့..ဒီနှစ်မြန် မာနိုင်ငံမှာ တကယ်ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီ သားရှင်ပြုအလှူကို ပြန်ကြည့်ပါဦး… မဏ္ဍာပ်ငှားတာ..၇=သိန်း။ ဆိုင်းငှားက ..၅-သိန်း..ဘိသိတ်က ၂-သိန်း။ အသံချဲစက် ၂-သိန်း။ အလှူ့အမ အလှပြင်ခ ၇-သောင်း။ အလှူအမ ထမိန်ဖိုး ၂သိန်းငါးသောင်း။ မြင်းငှားခ.. မောင်ရွှေရိုးအက.. ဟိုတတို့ ဒီတတို့ ၁၀-သိန်း။ ကိုရင်ဖို့ သင်္ကန်းဖိုးစုပေါင်း ၇-သောင်း။ ရွာကိုထမင်းကြွေးစရိတ် စတာတွေ.. အများကြီးပါ။ ဒါတွေဟာ ကိလေသာနဲ့ လှူတာတွေမဟုတ်ပါလား။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ဟုတ်တယ်လို့ ဆိုဆို…မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းငြင်း ဒီနေ့ နိုင်ငံအတွက် ဒီလိုအလှူတွေ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု အားနည်းတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှု ရှည်သွားတဲ့ အတွက် သီးခံပေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို အနုကမ်ပံ ဥပါဒါယ ဆိုတဲ့အတိုင်း သနားမှုကို အကြောင်းပြုပြီး ဆွေးနွေးပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုရင် အလွန်ဝမ်းသား မှာဖြစ်ပါကြောင်း… စာရှေသွားတဲ့အတွက် လွန်စွာအားနာမိပါကြောင်း။
တန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေမို့.. သာဓုပါလို့.. တိုတိုပဲပြန်လိုက်ပါကြောင်း…
လျောက်ပြောနေ..အနောက်နိုင်ငံမှာ သိန်းသန်းချီလှူတဲ့ အများစုဂ ကျောင်းဆေးရုံ ခန်းမတွေကို သူတို့နာမည်တပ်ပေးလို့..နောက်တစုက အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရလို့… စိတ်စေတနာနဲ့ စွန့်လွှတ်လှူဒါ ကြေးရတတ်တွေကြားမှာ နည်းပါသဗျာ…။ သို့ပေမဲ့ စနစ်ကောင်းတော့ လူတွေရဲ့အတ္တ လောဘ မာနကို သဲ့ယူတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စနစ်ပျက်သွားတော့ တဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်အပေါ်မူတည်ပီး ပေါက်ကရဖြစ်ကုန်တာ။ အခွန်ဆောင်တဲ့စနစ်မရှိတော့ အလှူနဲ့ အခွန်လျော့အောင်လုပ်ဖို့ မက်လုံးမရှိဘူး။ ပုဂ္ဂလိကနာမည်နဲ လှူတဲ့စနစ် မထွန်းကားဘူး..ဒါကတော့ စည်းစနစ်တကျ ချမ်းသာလာသူ ပညာတတ်များ မရှိလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ နာမည်တခုကို လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင် တန်ဖိုးထားတဲ့ဓလေ့ မထွန်းကားဘူး။ ဒါလည်း ရရစားစား နေ့မြင်ညပျောက် အစဉ်ပြေသလို ရုန်းကန်လှုပ်ရှား တချို့လည်းမုန့်စားရတဲ့ စနစ်ဆိုးကြောင့်ပဲလို အပြစ်တင်ပါရစေ..။
ကျုပ်လဲ ကိုဇောက်ထိုးရဲ့ စာတွေကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။
ဒီကွန်မင့်ထဲကစာတွေအားလုံးကို ရာနှုံးပြည့် သဘောတူပါတယ်။
အခွင့်ကြုံတဲ့တနေ့ (အဆဲခံနိုင်တဲ့တနေ့) မြန်မာတွေရဲ့ဒါနကို ပိုစ့်တင် ဆွေးနွေးပါဦးမယ်။
သိချင်လို့ ၀င်ဖတ်မိတော့လဲ မရပြန်။
ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာဆိုပြီး အခြေခံက ၃ ခုရှိသဗျ။
ဒါနက ရှည်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။အ၀ိဇ္ဖာ နဲ့ တဏှာ ကသာ လည်စေတာပါဗျ။
မသိမှု့ နဲ့ စွဲလမ်းမှူ့ပဲပြောကြပါစို့။
ဘာဝနာ ကိုမလုပ်နှိုင်သေးရင် သီလစောင့်ထိန်းပါ။
အနည်းဆုံး(၅)ပါးသီလပါ။ကဲဗျာ မထိန်းနှိုင်ရင်တော့ ဒါနကို ဆောက်တည်ကြပါဗျာ။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဘာဝနာမှမလုပ်နှိုင်တာ သံသရာကရှည်မှာပဲလေ။
သီလမစောင့်တော့ ငရဲကျဖို့များနေပြီလေ။ဒီတော့ ပြိတ္တာချင်းတူရင်တောင် ဒါန ရှိသူကသာသပေါ့။
ဘာဝနာဆောက်တည် နှိုင်ရင်တော့ သီလက အလိုလိုလုံပြီး ဒါနကတော့ အဟောသိကံပေါ့ဗျာ။
ဒါပေသည့်ထူးခြားတာက ပြတ်ပြီဆိုတာသိလဲ ဘာမကောင်းမှု့မှမကျူးလွန်တာ၊ဒါနတွေ ဆက်လုပ်သွား
တာ၊လူ့အသိုင်းဝန်းကို အစဉ်အမြဲ တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတာ။
အဲဂဒါ ဘယ်ဘာသာလဲဆိုတာ တွေးကြပါ။
ဒါနနဲ့ သံသရာ စပ်ဆက်မှုကို အကျင့်စရဏပါမှ မြင်ကောင်းတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက ဒါနမပြုရ ဆုမတောင်းရလို့ မမှာခဲ့ဘူး သို့သော် ဝေဒနာ တဏှာ ဥပဒါန် ဘဝ ဇာတိ.. လို့ အစဉ်လိုက် ဟောထားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ကြပေ့ါဗျာ… တဏှာအစွန်းနှစ်ဖက် လွတ်နေပီလားလို့… လွတ်ရင် ပြောကောင်းပါတယ်။ မိုးပြားဂိုဏ်းဝင်တွေဃတော့ အတော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ ပြောတော့ ကိလေသာကုန်တဲ့ ရဟန္တာရှင်မြတ်များရဲ့စကား.. လူဃတော့ မြေကြီးထဲဝင်နေပီ။ နဂါးဖြစ်မယ်မထင်နဲ့ နဂါးပြည်ရောက်လည်း နဂါးစာဖြစ်မှာ…။
If you donated nothing, you may go to hell. But Meditation is the first choice.